G-talk နဲ့Mobile ဖုန်းခေါ်မယ် ……. | အေးမင်းအောင်(နည်းပညာ)
← သူငယ်ချင်းများ အတွက် Gtalk Shortcuts လေးများ
gtalk အတွက် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာပြန်ချင်ရင် →
G-talk နဲ့Mobile ဖုန်းခေါ်မယ် …….
အသေးစိတ် သိလိုသေးရင်တော့ http://www.talkster.com ကို သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ZEALOT မှကူးယူပါတယ်။
By mmayeminaungtgo  Posted in Gtalk	 Tagged G-talk နဲ့Mobile ဖုန်းခေါ်မယ် .......
Cut rope ကြိုက်သူများအတွက်
Photoscape Mozilar Firefox 11.0 Zawgyi Gtalk Skype Flashplayer software keys